I-Microsoft Hololens 2 ukubuka kuqala kokungenzeka nge-intanethi-uxhumano lobuchopho: uMartin Vrijland
ahanjiswe UKUQALA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-4 March 2019	• 1 Comment
I-Microsoft Hololens 2 iyintuthuko emangalisayo enhle emkhakheni weqiniso elingathandabuzeki. Ukwenyuka ukungathandwa kwabathelisi esikubona kungqimba lombhalo mayelana nezwe langempela. Yingakho izibuko zeMicrosoft zenziwe ngezinto ezibonakalayo, ngokungafani nezibuko zangempela ezibonakalayo esazi ngamageyimu. Ukungathandwa kwabathelisi esikubona kungokwesikhathi esizayo futhi yilokho izinkampani ezifana ne-Google ezikwaziyo, eziye zafaka amakhulu ezinkulungwane ezimpini zeMicrosoft Leap; inkampani engakaze yenze noma yimuphi umthengisi, kodwa manje imatasa imatasa yonke idijithali yomhlaba.
Kuvidiyo engezansi usengakhuluma 'nge-home real mix' njengendawo lapho usebenzise khona amaHololens kakhulu. Lokhu kusho ukuthi isofthiwe ibalazwe ikhaya lakho noma indawo yokusebenzela (amafolda) ukuze ubeke izinto ongabuka futhi uhambe kuzo ezingxenyeni eziningi. I-Microsoft isebenza ngezinhlobo zamaphuzu 'we-anchor', ukuze abasebenzisi abaningi bakwazi ukubuka into ehlosiwe. Kumele ucabange ukuthi lokhu kungekudala kuzokwenzeka emhlabeni jikelele ngemizamo Ukuhleleka komlingo (I-Google), i-Microsoft nabanye abaningi. Ngalokho udinga ukudonsa umkhawulokudonsa okwanele futhi lokho okuzogcwaliswa yi-the Amanethiwekhi we-5G.
Isizathu sokubheka ngokuphindaphindiwe le ndaba ngukuthi ngifuna ukukukhombisa ukuthi izwe esiphila kulo lihlanganisa ngokuphindaphindiwe into yangempela yokufanisa. It uthola ezithakazelisayo nakakhulu njengoba big izinkampani zobuchwepheshe projecting izithombe besakwazi lekumele azuzwe ngamasango ubudala ngokuthi "amehlo", "izindlebe", "impumulo", "ulimi" bese uthinta yethu. Phela, lezo zintsha zibangela ukubambezeleka kolwazi esingaluthola. Igama elikhulunywayo kufanele lamukelwe izindlebe nesithombe kufanele kubonwe ngamehlo. Lokhu kuguqulwa kube uphawu lwe-electrochemical ebuchosheni futhi luguqulwe sibe isithombe futhi luzwakala ngumbono. Okufanayo kusebenza nakuwo wonke omunye umbono wezinzwa. Ngakho uma ufuna ukufunda yonke incwadi, kufanele wenze lelo gama ngegama, ikhasi ngekhasi. Ukulanda ucezu kolwazi olusuka encwadini yokutadisha, noma kunjalo, luhamba ngokushesha uma ungathola lezo zinsuku ngaphandle kwalo. Siyakwati loku isimiso namanje the best movie trilogy I Matrix, lapho Neo ifunda Kung Fu Ngokuphazima kweso noma ngeke nje ukulandwa uhlelo indiza enophephela emhlane.
Yebo, yilokho konke okuyi-SciFi futhi akuyona into engokoqobo, ungase ucabange, kodwa ososayensi bacabanga khona okwamanje ahluke kakhulu. Ubuchwepheshe obunjalo buyeza ngempela. U-Elon Musk akazange aqalise lutho olubizwa ngeNeuralink. Uma ngokoqobo ukungathandwa kwabathelisi esikubona (efana Hololens) esingokoqobo nomhlaba Magic Leap ngokugcwele sayinwe esikuyi, ungakwazi ke wenze ungqimba digital emhlabeni wonke futhi siqinisekise ukuthi wonke umuntu angakwazi ukubona okufanayo (ngombono wakhe ). Ungabese futhi kushukumise bonke bezibona sezinzwa ebuchosheni, nawe bayothutheleka nempilo izibankwakazi ngifuna ikwazi ngokusebenzisa Amsterdam nabantu ukwenza iphunga umjuluko isikhwehlela emoyeni. Ungakwazi ngisho ukulinganisa umuzwa wensimu evundile ngokumane uvuselele ubuchopho. Izwe eliyinkimbinkimbi cishe cishe lingabonakali nakancane futhi i-Jurassic Park iba yinto entsha ngokuphelele.
Kungani konke lokhu kujabulisa kangaka? Manje, njengoba ubuchwepheshe Microsoft ne-Google zisebenzisa ingacamelisa khona ihange esikhaleni digital, eziningi (uma kungezona zonke) zifana nalokho e quantum physics "quantum izihibe" ishidi (bheka lapha). Ngikuphikisa ukuthi ungenele kakhulu kuwe i-theory yokulingisa. Ake sithi sesivele siphila ekulandiseni okulingana nomdlali, lapho umphefumulo kungumdlali kanye nezwe elizungezile lithinta izinto ngenxa yombono ngomphefumulo (funda: imiphefumulo kumdlalo we-multi-player), khona-ke isimiso sokufaka ifu, njengoba i-Google ne-Microsoft isebenza, kuyimfuneko ukuba wonke umuntu akwazi ukugcina into efanayo. Noma kunjalo, isithombe sibhekwa kuphela uma abantu behambela endaweni ethile. Isibonelo, uma usetha i-Microsoft Hololens, ikhompiyutha akudingeki yakha isithombe ngemuva kwakho. Leso sithombe kuphela sivela 'kokuqokwa' uma uvula ikhanda lakho. Uma abadlali beMicrosoft Leap digital digital e-Amsterdam, ikhompyutha ephakathi idinga ukwakha leso sithombe. Ama-anchors amafu bese uqinisekisa ukuthi wonke umuntu ubona into ngesikhathi esisodwa endaweni efanayo, ngokubheka kwakhe.
Izwe leqiniso elingenalo ukungathandwa kwabathelisi esikubona njengezinkampani ezinkulu zezobuchwepheshe ezikhiqiza manje kubonisa ukuthi amasu asetshenziselwa ukusebenzisa imigomo efanayo nemigomo ye-quantum physics. Umqondo 'wokubeka phambili' futhi - okubizwa ngokuthi - ukuphakama kolwazi ngokubheka ngokubheka, kufana nokuvela kuseva eliphakathi kwesithombe esikrinini sakho noma ku-Hololens nge-inthanethi ye-simulation multi-player. Ukwehlukaniswa kwe-Quantum kuqinisekisa ukuthi wonke umuntu obukayo ubheka okufanayo futhi ngaleyo ndlela ulawula isimiso sokufaka ifu. Ngaphezu kwalokho, ukubonwa kokuqala kuqinisekisa ukuthi ulwazi lunikeza (i-double slits test). Akusilo lokho kutholakala okumnandi?
Uma siqala ukuqonda ngokwengeziwe ukuthi siphila ekufaniseni, singase futhi siqaphele ukuthi singubani ngempela. Sizophinde sithole ukuqonda okungaphezulu komgomo 'wokulinganisa' (funda lapha) futhi ekugcineni sithola ngisho nokuthi lokhu okuyiqiniso (noma kunalokho 'ukulinganisa') kuye kwahlelwa ngendlela ethile. Singathola ngisho nokuthi kukhona iskripthi. Ngaphakathi lesi sihloko Ngikuchazile ngalokhu ngokuningiliziwe futhi ngichaze ukuthi kungani 'inkululeko yokuzikhethela' kufanele ihlonishwe ngokufaniswa (ngaphandle kwalokho ngeke kube ukulinganisa, kodwa kungaba nomphumela wokuba yi-deterministic). Ngineluleka ukuba ufunde ngokucophelela. Ukuthola okubaluleke kunazo zonke ozokwenza, ngombono wami, okulandelayo:
Uyothola ukuthi akusiwo umzimba wakho avatar, kodwa oqaphela umphefumulo e sekulingisa multi-player, lapho izwe imizimba kuphela futhi kungaba kuphela yakha bezibona umphefumulo. Ungaphazamisa lesi script uphinde uthonye umphumela ngokusebenza ezingeni lomphefumulo futhi ungasadlali umdlalo ngokusho kweskripthi, kodwa ulandela intando yakho yokuzikhethela. Awusona umzimba wakho noma ingqondo yakho, ungumuntu odlala (odlala) umphefumulo.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: futurism.com
Singakuyeka kanjani inqubo yesiprofetho sesikhashana sokugcina?
Kungani ukwesaba ukufa kungamanga amakhulu kunabo bonke
Amathegi: 2, i-anchoring, amahange, ifu, double, ukuhlolwa, afakiwe, Hololens, i-quantum physics, ukungena kwe-quantum, Mircosoft, okusha, ukulingisa, ama-slits, ukubeka phezulu, ithiyori, ezimbili
5 March 2019 ku-11: 34
« I-5G nokudluliselwa komuntu
I-Brain-Computer Interfaces kakade esikhathini esifushane: ingabe i-Facebook ingafunda ngokushesha imicabango yethu? Impendulo: yebo »
Ukuvakashelwa okuphelele: 9.468.683